Eziokwu 5 kachasị elu banyere nchọpụta Cialis ntụ ntụ | AASraw Cialis ntụ ntụ
/blog/Cialis , tadalafil/Ihe gbasara 5 kachasị elu banyere nchọpụta Cialis
Ihe na 01 / 13 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Cialis, tadalafil.
Nke a na-agụkarị gbasara ihe gbasara ọtụtụ ndị mmadụ, ndị chọrọ mkpa ịlụ ọgwụ, dị ka Cialis ntụ ntụ, Cialis VS, Cialis ntụ ntụ nyocha, Q & A banyere cialis ntụ ntụ ... Site na nyocha Cialis ntụ ntụ, anyị nwere ike ịma nke a, ọ bụ ezigbo ama ịkwa iko nke nwanyi, ya mere ọtụtụ ndị karịsịa ndị na-emepụta ngwaahịa na Cialis na-emekarị zụta cialis ntụ ntụ site na cialis uzuzu zoro ezo, na-eme ka ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ.
Kedu Cialis ntụ ntụ?
aha Tadalafil / Cialis
Ụdị White ntụ ntụ
Solubility Mmiri na mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ mmanya, Acetic acid, ethyl ester.
Loss na ihicha ≤0.5%
arọ metal ≤10ppm
Ọnụọgụ ọgwụ 10-20mg
Oge mmalite 30minutes
ọkwa Nlekọta ọgwụ
Kedu ihe Cialis ntụ ntụ mere?
Cialis ntụ ntụ a na-emekarị n'ụdị dị iche iche, ụdị mpempe akwụkwọ Cialis, Cialis capsules ... nke Cialis na-egosi, ọtụtụ ndị na-azụta Cialis ntụ ntụ iji mee Cialis ọgwụ ọjọọ. Drug Cialis bụ PDE5 inhibitor eji maka ọgwụgwọ maka erectile na-adịghị mma n'ime mmadụ. Ọtụtụ ndị ikom na-ejikarị nsogbu arụ ọrụ arụ ọrụ n'oge ụfọdụ ná ndụ ha. Nsogbu ndị a na-agụnye ịghara inwe ike ịmepụta, retrograde ejaculation ebe ọnye na-abanye n'ime eriri afo kama ịbụ nke na-enweghị ike ịmebe ụlọ mgbe otu.
Nke a bụ nsogbu dị oké njọ na ọtụtụ ndị nọ n'ebe ahụ, ebe ọ bụ na ọnọdụ ahụ na-emetụta ndị ikom mgbe nile na-enwekarị nkụda mmụọ na enweghị ùgwù onwe onye. Ọ na-eme ka ndị dị otú ahụ nwee mmetụta na-enweghị nwoke ma hapụ ha na-eche otú ha ga-esi nagide. Otú ọ dị, iwebata cialis emewo ka ọtụtụ ndị nwee olile anya ma na-enye olileanya maka ụbọchị ndị dị mma n'ọdịnihu. E gosipụtara mgbakwụnye mmezi a maka ọgwụgwọ nke ụmụ nwoke na-arịa ọrịa electile (ED), ndị nwere ihe ịrịba ama na ihe mgbaàmà nke hyperplasia prostate bench (BPH), na ndị nwere ma ED ma ihe ịrịba ama na ihe mgbaàmà nke BPH. Ọ bụ otu n'ime ụzọ kasị dịrị nchebe na ụzọ kasị dị irè iji chọta ngwọta na-adịgide adịgide maka nsogbu ED na ụmụ nwoke. Usoro a gụnyere dị mfe ma na-erughị ala ma ị nwere ike ịtụ anya nsonaazụ ọma n'ime oge kachasị dị mkpirikpi, ma ọ bụrụhaala na i nwere ike imejuputa ojiji nke Ozi nchekwa dị mkpa maka ọgwụ Cialis.
Ndị a bụ ọgwụ ọjọọ a maara na ọ dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma n'ịmekọrịta ED. A maara ha nke ọma maka ikike ha nwere ime ka ụfọdụ ndị nwee mmetụta nke mmekọahụ. Ebee ka Cialis na Sildenafil (viagra). Viagra na Cialis bụ PDE-5 inhibitors. Ha na-eme ka ahịrị ahụ dị ụtọ na arịa ọbara na-enye mkpịsị ọbara. Oge ntụrụndụ a na-eme ka ọbara na-erugharị iji nyere aka rụọ ụlọ, ma Cialis yiri ka ọ bụ ewu karịa, Nyocha Cialis ntụ ntụ gosiri ihe kpatara ya:
Tadalafil uzuzu uzuzuN'uma ha nwere ngwa ngwa ngwa ngwa, Tadalafil na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa Viagra. Ọ bụ ezie na Viagra na-ejikarị oge 20-30, Cialis nwere ike ịrụ ọrụ na minit 15-20. Cialis dịkwa dị ka Cialis Daily, nke a na-ewere otu ugboro n'ụbọchị, ma ga - enyere gị aka ịmepụta ụlọ n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Cialis vs Viagra- Kedu nke ka mma maka eji eme ihe kwa ụbọchị?
Anyị niile maara na usoro Viagra nke a tụrụ aro ya bụ 100mg na nke a sitere na 50-150 mg dabere na onye na-ewere ya.
Ọ bụ ezie na Cialis, usoro a na-atụ aro ya bụ 20mg na nke a nwekwara ike ịkwalite 40mg.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na mmadụ kpebie iji Viagra kwa ụbọchị, onye ahụ aghaghị ịdị njikere iji ọgwụ 4 kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe dị oke ize ndụ ime ka enwere mmetụta dị oke egwu na-emetụta ọbụna na-ewere ihe karịa otu ihe na-eri otu ụbọchị. Cialis n'aka nke ọzọ na-adịgide karịa otu ụbọchị ma ọ bụrụ na a na-elo otu mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụ ya kacha mma ma a bịa n'iji ya mee ihe kwa ụbọchị. Nke a na-egosipụtakarị nke a site na NHS na-eme ndokwa ka e nye ndị mmadụ kwa ụbọchị. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ kwa ụbọchị, Cialis ka mma.
Q & A banyere nnyocha Cialis ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na anyị na-eme Cialis ntụ ntụ nyocha, anyị na-enyocha Intanet, nzukọ dị mkpa, na ụfọdụ n'ime ndị ahịa anyị, nweta ụfọdụ ozi, ebe a bụ ụfọdụ ajụjụ ndị ahịa na-elekọta, Nchọpụta Cialis ntụ ntụ na-egosi:
Ụlọ m ga-agbapụtakarị?
Ogologo oge ọ ga - ewe maka ụlọ nrụpụta gị mgbe ị jiri cialis ntụ ntụ ga - adịgasị iche site na mmadụ na onye ọzọ, mgbe mgbe nwa okorobịa ga - anọgide na - eguzosi ike ruo oge ụfọdụ mgbe ọ nwụsịrị, onye okenye nwere ike ịchọpụta na ha na - erection ngwa ngwa mgbe ejaculating. Ị ga - achọpụta mgbe niile na ị ga - alaghachi na ala flaccid karịa ma ọ bụ karịa n'ime oge oge ọ na - emekarị.
E kwere ka ụmụ nwanyị kwere Cialis ntụ ntụ?
Otu ajụjụ ọtụtụ ndị nwoke ga-ajụ bụ ma ọ bụrụ na uru ọ bụla dị na ya na nwunye ya ma ọ bụ ndị mmekọ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-ewere Cialis ntụ ntụ ma n'otu oge ahụ. Biko mara na otu isi ihe mere i ji jiri Tadalafil jelii mee ihe maka ịgwọ ọrịa nke erectile, ma dị ka ndị dị otú ahụ, ọ gaghị aba uru ọ bụla iji nye ọgwụ a nye nwunye gị ma ọ bụ onye mmekọ nwanyị. Onye ahụ nwere ike ịmalite ịmalite ịrịa ọrịa na-ata ahụhụ otu n'ime ọtụtụ nsogbu ndị dị na ịṅụ ọgwụ a ka ọ bụrụ na ọ nweghị ọnọdụ ọ bụla ụmụ nwanyị ga-ewere ya.
Ngwá ọgwụ a ọ ga-eme ka m kwụsị ogologo oge inwe mmekọahụ?
Mgbe ị na-ewere Cialis ntụ ntụ ị gaghị achọpụta na ị nwere ike ime ka ịhụnanya dịkwuo ka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ejaculation ma ọ bụ na-echegbu onwe gị banyere nke a, biko gwa dọkịta gị okwu dịka ọgwụ a na-enyere gị aka kwado ma nọgide na-ere ya ma ọ bụrụ na ahụhụ site na nrụrụ erectile.
Enwere m ike ị nweta ọgwụ ọzọ mgbe e mesịrị?
Ọ bụrụhaala na ị nara ọgwụ mbụ nke ọgwụ a ma soro usoro ntụzi ụkwụ ziri ezi mgbe ahụ, a ga-ahapụ gị ka ị were ọgwụ ọzọ n'ime oge ntanetịime ndị e gosipụtara na akwụkwọ. Biko emela ihe ọ bụla n'ọnọdụ ọgwụ a ọzọ ma ọ bụrụ na ị ka dị irè nke mbido mbụ ahụ. Ị ga-ahụ ihe niile ziri ezi nke usoro onyonyo na okpokoro oge maka iwe ya na akwụkwọ ndị na-abịa na ngwaahịa a nke ị na-atụ anya ka ị gụọ ma soro.
Echere m na abụ m agadi n'ihi ngwaahịa a
Biko echela na i meela agadi iji jiri ọgwụ a eme ihe, n'ihi na n'agbanyeghị afọ ole ị dị ma ọ bụrụ na ị na - ata ahụhụ n'ụdị ụdị ọkpụkpụ nke erectile na ịchọrọ ịnwe ma nọgide na - adị ndụ ma ọ bụrụ na ọgwụ a bụ na-aga izu okè maka gị. Ogologo oge ị na - agbaso ntụziaka ahụ ma jiri ezigbo usoro onyonyo mee ihe, enwere nnukwu ohere nke ọ na - arụ ọrụ nke ọma na gị, yabụ tinye obi abụọ gị na ị bụ agadi iji mee ya!
Nri nke dabeere na Nite na Cialis ntụ ntụ
Ọ bụrụ na ị na-ewere Neditị nke dabeere na Nitrate ugbu a, ị gaghị eji Viagra ma ọ bụ Cialis ntụ ntụ, dịka site na ime nke a nwere ike ịkpata nnukwu mbenata nke ọbara gị nke ga-esi ike ịgwọ. Biko zere iwere Viagra ma ọ bụ Cialis ntụ ntụ ị kwesịrị ị na-ewere ọgwụgwọ Nitrate ọ bụla, ọ bụrụ na obi abụọ adịghị ya na ị gakwuru dọkịta gị.
Cialis ntụ ntụ nyocha
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta Cailis ntụ ntụ, ị ga-amatakwu ihe ndị ọzọ chere maka ya, maka ntụle, ebe a bụ ụfọdụ ntụle Cialis ntụ ntụ, Nyocha Cialis ntụ ntụ na-egosi:
Enyocha Cialison 9 / 11 / 2017
Enwere m nsogbu abụọ, otu bụ nsogbu nrụpụta na
onye ọzọ bụ Ejaculation Mbụ. Ya mere, oge mbụ, ụnyaahụ Saturday, ejiri m 5mg Cialis. Mgbe otu awa gasịrị, enwere m mmetụta n'oge m dị afọ iri na ụma n'ihi nnukwu ụlọ e ji nkume-siri ike na nke a na-atụghị anya ya, nke na-agbakwunye n'ogologo na ọkpụrụkpụ bara uru, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị. Ọ dị ịtụnanya na arụmọrụ siri ike nke na-enweghị nkwụsị na-aga n'ihu n'ihu ihe karịrị ọkara oge elekere anya ma nwee ọnọdụ dị iche iche.
Maka Erectile Dysfunction "Ejiri m 10mg Cialis maka ED. Site na mbụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ na 4pm anaghị m achọpụta ihe ọ bụla ruo mgbe m tetara n'ụra banyere 3am na ụlọ nrụgide siri ike. N'ezie m tetara ugboro abụọ kwa abalị maka abalị 2 sochirinụ maka otu ihe kpatara ya. Mmekọahụ dị mfe ma rụọ ọrụ n'ezie! Naanị akụkụ dị mma bụ isi nro dị arọ n'oge abalị - ya mere m adịghị mkpa paracetamol ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. N'ezie ọ dịghị mmetụta ọ bụla n'ụbọchị. N'ihi ya, ekpebiri m ịnwale ọgwụ ahụ iji hụ ma enwere m ike itinye mbadamba nkume ahụ. Azụrụ m mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma kpochaa ya ma mezie ọgwụ 10mg. Nara mbadamba nke iri anọ kwa ụbọchị ma ugbu a ọzọ ụbọchị. Na-arụ ọrụ nke ọma! "
Maka Erectile Dysfunction "Amalitere iburu 5 mg ọnwa ole na ole gara aga na naanị mgbe ị ga-enwe mmekọahụ. Maka m, ọgwụ a na-ewe oge 2 iji kụọ ma nwee otu ụbọchị ma ọ bụ 2, ọ bụ ezie na obere na obere. M wee gbalịa 10mg .. ihe ndị ahụ ma ọ bụ ọbụna nsonaazụ dị mma. (dị ka nro dị ịtụnanya). Ọbụnadị na 80% ọdịda ụbụrụ na-arụ ọrụ n'ihu Cialis, ọgwụ ahụ na-edozi m kpamkpam. Ya mere, enweghị okwukwe maka okwu. Biko nwaa ya maka onwe gị. Naanị ihe mere m ji nweta ebe a bụ site na ndị posts n'ihu m na-agba ume m .. ekele gị ekele ... hugs na kisses :)) "
5 New Years 'Onyinye maka raw tadalafil uzuzu	Kedu ka esi kpoo raw trenbolone acetate ntụ ntụ?